Thu, Jul 2, 2020 at 9:02pm
भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी छ : अध्यक्ष दाहाल
जनकपुरधाम, ३ भदौ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधले उत्पन्न हुँदै आएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा उहाँले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देश मिलेर जनताको हितमा कार्य गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । बाँध..
निर्वाचन आयोग : ५० पदका लागि ४० करोड खर्च
काठमाडौँ, ३ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचनमा ५५० मतदान केन्द्र कायम हुने जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक र वडाध्यक्ष ४१ समेत गरी ५० पदका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा करीब पाँच लाख मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । गत साउन..
रवि लामिछाने सहित तीनै जनालाई चितवन अदालत लगियो, रिहाईको सम्भावना कति ?
चितवन, ३ भदौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका सहित तीन जनालाई चितवन जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको छ । मंगलवार विहान दश बजे नै उनिहरुलाई अदालत पुर्याइएको हो । पाँच दिनको अनुसन्धान र बयानपछि छैठौ दिनमा अदालत उपस्थित गराइएको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दान बहादुर मल्लले जानकारी दिए । अदालत पेस गरिएकोमा लामिछाने सहित न्यू..
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले दिए राजीनामा
काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। साहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार राजीनामा बुझाएका हुन्। प्रदेश २ को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न नेतृत्वबाट निरन्तर असहयोग भएको भन्दै राजीनामा दिएको साहका निजी सचिव निभेष कुमारले बताए । नेकपाले गत असोज ५ गते सातै प्रदेशका अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो साहले..
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक किन् बोलाए सर्वदलीय बैठक ?
काठमाडौँ, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसद्मा प्रतिनिनिधित्व गर्ने सबै राजनीति दलहरुलाई बोलाइएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी चयन,..
ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी, ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका
काठमाडौँ, ३ भदौ । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक..
कलिलैमा बिहेले कानुनी झमेला, जबर्जस्ती करणीको मुद्दा
काठमाडौँ, ३ भदौ । ९ महिनाअघि मोरङको रंगेली नगरपालिकाका १७ वर्षीया एक किशोरी र १९ वर्षीय एक किशोर गाउँबाट हराए । गाउँमा खैलाबैला मच्चियो । किशोरीका आमाबुबाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा छोरी हराएको भन्दै निवेदन दिए । प्रहरीले दुवैलाई एकै स्थानबाट फेला पार्‍यो । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू सँगै भागेका थिए । कानुनतः २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले..
पूर्वराजा र विप्लवलाई गाली पञ्चायतकालीन ‘अराष्ट्रिय तत्व’ जस्तै
काठमाडौँ, ३ भदौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहलाई सरकार र यसका पक्षपातीले गर्ने आलोचना पञ्चायतकालीन शासकले ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनेर बच्ने प्रयास गरेजस्तै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ– ‘राजनीतिमा हाउगुजी देखाएर अरूलाई तह लगाउने विधि नयाँ होइन, चाणक्य÷कौटिल्य कालमा पनि यस्तै गरिन्थ्यो, आज केपी ओली सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। तर,..
काठमाडौँ, ३ भदौ । निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको हो। अहिले उमेर हद ५८ वर्ष छ। विधेयक संसद्मा दफावार छलफलको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारीको हकमा मात्रै उमेर हद..
रविको बयान आज
काठमाडौँ, ३ भदौ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर यति बेला चितवन धेरै नै तातिएको छ। उसै त चितवनमा भदौको गर्मी त्यसमा पनि न्युज २४ टिभीका पत्रकारद्वय रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा जोडेर अनुसन्धान भइरहेका बेला सडक झनै तातेको छ। आज मंगलबार रवि लामिछानेसँग बयान लिने तयारी भइरहेको छ। तर, सडकमा उर्लेको भीडले कतै दुर्घटना त निम्त्याउँदै..
काठमाडौँ, ३ भदौ । सत्तारूढ नेकपाभित्र पार्टीमा नयाँ धुव्रीकरण देखा परेको छ। पार्टीमा मुख्य तीन धार (केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल) भए पनि एजेन्डागत निर्णयमा दुई धार देखिँदै आएको छ। नेताहरूले आफ्नो ‘पोजिसन’ ख्याल गर्दै बेलाबेलामा दुई धारको समीकरण बनाउँदै आएका छन्। साउन ३१ र भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपाभित्र नयाँ समीकरण निर्माण भएको हो। बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी..
पूर्वयुवराज पारस शाहले भने : मैले जे गरेँ एउटा बाबुको नाताले गरेँ
काठमाडौँ, २ भदौ पूर्वयुवराज पारस शाहले त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी अधिकृतलाई हातपात गरेको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका एक सईलाई हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘मेरो आमा उपचारको क्रममा बैंकक जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जब त्यहाँका प्रहरी अधिकृतले मेरो छोरालाई झण्डा ताकेपछि एउटा बाबुको..
द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउन संयुक्त आयोगको बैठक केन्द्रित हुँदै
काठमाडौँ, २ भदौ यही भदौ ४ र ५ गते राजधानीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताइएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन बैठकबाट मद्दत पुुग्ने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनलाई बैठकको केन्द्रमा समावेश गरिएको छ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र..
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वारा राजीनामा !
काठमाडौँ, २ भदौ उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । न्यायाधीश अधिकारीले न्याय परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष राजीनामा दिनुभएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राजीनामा पत्रमा घरायसी समस्या भएको कारण पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख छ । घरायसी समस्याका कारण राजीनामा दिएको भनिए तापनि गोर्खा ब्रुअरीको अन्तःशुल्कको मुद्दामा क्षेत्रधिकार विवाद भएपछि..
यस्तो छ नेकपाको बदलिएको संरचना, कसकाे स्थान कहाँ ?
काठमाण्डौं, २ भदाै । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा'को सचिवालय बैठकले पार्टीको संरचना थप गर्नुका साथै नेताहरुको वरीयता नै हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार र आइतबार बसेको बैठकले सचिवालय हेरफेरका साथै समीकरणमा समेत फेरबदल गरेको हाे । बैठकले झण्डै डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झिरहेको पार्टी एकताको बाँकी कामलाई पूर्णता दिएको भए पनि विवादरहित भने बनाउन सकेन । शुक्रबारको बैठकले पार्टीको संरचनामा उपाध्यक्ष पद थप गर्यो..
कश्मीर विवाद : नेपालले मुख खोल्यो, यसो भने परराष्ट्रमन्त्रीले
काठमाडौँ, २ भदौ नेपाल सरकारले जम्मु कस्मिरबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यो मुद्दाको समाधान दुई पक्षीय वार्ताबाट गरिनु पर्ने बताएका छन् । ‘कस्मिर मुद्दालाई नेपालले नजिकबाट हेरिरहेको छ । त्यहाँ रहेका करिब ८० हजार नेपाली नागरिकको सुरक्षामा नेपालले चासो व्यक्त गरेको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने । उनले कस्मिर मुद्दाको समाधान वार्ताबाटै खोजिनु पर्नेमा जोड दिए । कस्मिरका नेपाली..
पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण : भरतपुरको चौविसकोठीमा झडप, केही प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा
चितवन, २ भदौं । प्रर्दशनका क्रममा निषेधाज्ञा जारी गरेको क्षेत्रमा प्रर्दशनकारी प्रवेश गर्न खोजेपछि झडप भएको छ । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यू २४ का कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको समर्थकहरुले आज पनि भरतपुरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।..
Results 9714: You are at page 105 of 324